OLAC Record: Fonds Denise Bernot, birman, 1964, bande 029, face A
Title: Fonds Denise Bernot, birman, 1964, bande 029, face A
Abstract: U San Tun raconte une série de contes de Birmanie centrale. Le premier, dont on n’entend ni le début, ni la fin, raconte la réincarnation dans plusieurs vies d’une femme et d’une poule qui se détestent (jusqu’à 11 min.). A la fin, celle qui était une poule devient le nat (esprit tutélaire) Phone Ma Kyi de Pagan (de 12 à 15 min.). Le suivant est l'histoire de deux amis qui partent en quête de fortune, mais qui finissent par se disputer (de 15 à 23 min.). Le troisième est l’histoire d’un moine qui rencontre des habitants de Paukkan, qui sont tellement érudits que le moine ne comprend pas ce qu'ils disent (de 23 à 29.20 min). Le dernier conte rapporte les aventures d’un habitant du village d’‘A me na’, ce qui veut dire ‘sans gêne’, qui part travailler en Basse-Birmanie où il ne cesse de déranger tout le monde (jusqu'à 44mn). U San Tun raconte ensuite les artisanats, les croyances des habitants de Paukkan, d'où il est apparemment originaire (jusqu'à 46.50mn). U Toe Lon raconte l'histoire de deux amis de Birmanie centrale qui partent travailler en Basse-Birmanie et se mettent au service d’un moine (coupé à 67mn, la fin se trouve dans l'enregistrement suivant BER-1964-BUR-029-B_SOUND).
U San Tun tells several tales from central Burma. The first one, which has no beginning and no end in the recording, is the story of the successive lives and reincarnations ofawoman andahen that hate each other (until 11 min.). In the end, she [the one who used to be the hen] becomes the Phone Ma Kyi nat (spirit) of Pagan (from 12 to 15 min.). Next is the story of two friends who go makeafortune on their own, but end up fighting with each other (from 15 to 23 min). The third tale is the story ofamonk who meets several villagers from Paukkan region. The villagers are so clever and knowledgeable that the monk does not understand what they say (from 23 to 29.20 min.) The last one tells the adventures ofavillager from ‘A me na’ [which means ‘not embarrassed’] who goes to work in Lower Burma where he keeps on annoying every person he meets there (until 44 min.). Finally, U San Tun explains the arts and crafts, customs and believes of Paukkan, which is apparently his native town (until 46.50 min.) Next, U Toe Lon tells the story of two friends from Central Burma who go look forajob in Lower Burma, where they start working foramonk (cut at 67 min., the end of the story can be found in the recording BER-1964-BUR-029-B_SOUND).
ဦးစံထွန်းသည် မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းမှ ပုံပြင်အတော်များများကိုပြောသည်။ ပထမအပုဒ် အသံသွင်းရာ တွင် အစမရှိသလို အဆုံးလည်းမရှိပါ။ ပုံပြင်မှာ မိန်းမတဦးနှင့် ကြက်မတကောင်တို့၏ တဦးကိုတဦး မုန်း တီးမှုဖြင့် ဘဝပေါင်းဆက်ဆက်ကာဝင်စားကြပုံကိုပြောကြားသည်။ (၁၁ မိနစ်ထိ)။ နောက်ပိုင်းတွင် ပုဂံမြို့မှ(ပုန်းမကြည်နတ်)ဖြစ်သွားသောအကြောင်းဖြစ်သည်။ (၁၂ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ်ထိ)။ နောက်ပုံပြင်တပုဒ်မှာ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦး စီးပွားဖြစ်ကြီးပွားအောင်မြင်ပြီးသော်လည်း အဆုံးသတ် တွင် တဦးနှင့်တဦးတိုက်ခိုက်ကြပုံကိုဖော်ပြသည်။(၁၅ မှ ၂၃ မိနစ်ထိ) တတိယပုံပြင်မှာ ပေါက္ကံဒေသမှ ရွာသူရွာသားများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ရဟန်းတပါး၏ အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ပေါက္ကံရွာသူရွာသားများသည် ဗဟုသုတကြွယ်ဝပြီး ပါးနပ်ကြသဖြင့် ၄င်းတို့ပြောကြားသည် ကို ရဟန်းအနေဖြင့် နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိပုံကို ပြောပြထားသည်။ (၂၃ မိနစ်မှ ၂၉.၂၀မိနစ်ထိ) နောက်ဆုံးအပုဒ်မှာ ‘အားမနာ’ဟုအမည်ရှိသောကျေးရွာမှ ရွာသားတဦး အောက်မြန်မာပြည်သို့ အလုပ်လုပ်ရန်သွားသောစွန့်စားခန်းပုံပြင်ဖြစ်သည်။ အောက်မြန်မာပြည်တွင် ကြုံတွေ့ရသောသူမှန်သမျှ ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောအကြောင်းဖြစ်သည်။ (၄၄ မိနစ်အထိ) နောက်ဆုံးတွင် ဦးစံထွန်းသည် ၄င်း၏မွေးရာဇာတိပေါက္ကံပြည်၏ လက်မှုအနုပညာ၊ ဓလေ့ထုံးစံ နှင့် ယုံကြည်မှုများအကြောင်းကိုပေါက္ကံပြည်သားပီသစွာ ရှင်းပြသည်။ (၄၆.၅၀ မိနစ်ထိ) ထပ်မံ၍ ဦးတိုးလုံသည် မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းမှ သူငယ်ချင်း (၂)ဦး မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်း သို့ အလုပ်ရှာသွားကြပုံ၊ အောက်မြန်မာပြည်ဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ရဟန်းတပါးအား အလုပ်အကျွေးပြုခြင်းဖြင့် စတင်အလုပ်လုပ်ကြပုံကို ပြောကြားသည်။(၆၇ မိနစ်တွင် ပြတ်တောက်သွားသည်။ အဆုံးသတ်ကို BER-1964-Bur-029-B Sound တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။)
Alternative Title: Fonds Denise Bernot, Burmese, 1964, tape 029, side A
Description: U San Tun raconte un conte de Pagan (inscription support bande) dont on n'entend pas le début, ni la fin dans l'enregistrement. Un homme donne à son ami un œuf de tortue pour nourrir ses enfants. La femme de ce dernier le fait bouillir et le donne aux enfants. Le lendemain, quand la cadette demande à sa mère de l’œuf de tortue, la mère décide de faire bouillir un œuf de poule. La poule de la maison, très malheureuse de voir ses œufs disparaître, prie pour que la femme aille en enfer. Dans leur vie suivante, la poule se réincarne en tigre et la femme en biche. La biche prie pour que dans sa vie suivante elle puisse manger le tigre. La poule devient un chat et la biche un tigre, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils parviennent à leurs vies humaines. Ils deviennent un couple de riches sans enfant. La femme permet alors à son mari de se marier avec la voisine. Ils ont des enfants, mais ils ne sont pas plus heureux et souhaitent du malheur à l'autre. Dans leur vie suivante, la femme devient l’ogresse Phone Ma Kyi qui mange les enfants de l'autre femme. Les deux vont voir le Bouddha (jusqu'à 11 min., puis coupé; reprend à 12 min.). A la fin, celle qui était au départ la poule devient le nat (esprit tutélaire) Phone Ma Kyi de Pagan, qui donne des prédictions aux paysans sur le temps, le climat etc. Dans les environs de Pagan, on révère aussi le nat Maung Daing qui était un garçon vacher devenu nat de Pagan quand il est mort. Il est connu comme le nat protecteur des vaches. (jusqu'à 15 min.). U San Tun raconte ensuite l'histoire de deux amis qui partent en quête de fortune. L'un travail dur, épargne et accumule beaucoup de biens, alors que l'autre dépense son argent et s’appauvrit. Puis, ils se retrouvent dans leur village et le second décide de tuer le premier pour lui voler ses biens. Celui-ci l’implore de lui laisser la vie et de ne prendre que son argent, il le tue tout de même. Il prend ses biens et rentre au village où il ment au sujet de la mort de son ami. Mais il finit par avouer son crime à sa femme. Un jour, ils se disputent et la famille de l’ami apprend alors la vérité. Ensuite, l'affaire est portée devant les tribunaux (jusqu'à 23 min.). Un moine rencontre un pêcheur d’un endroit appelé « éloquent» de la région de Paukkan, dont les habitants sont réputés érudits. Le pêcheur parle de façon tellement érudite que le moine ne comprend pas ce qu'il dit. Il rencontre ensuite plusieurs paysannes qui lui posent des devinettes et des problèmes insolubles (jusqu'à 29.20 min.). Le ministre Nanda Thura du bas paysacomme serviteurs des habitants de différents villages de Pagan. L'un d'eux est du village de 'A me na' [qui veut dire 'sans gêne']. Un jour, les serviteurs apprennent que ce dernieracuisiné un poisson apporté par un aigle, et qu’il leuradonné à manger. Les autres lui font comprendre qu'il ne peut utiliser les affaires prises à quelqu'un. Ils repartent ensuite dans leurs villages respectifs, mais promettent de continuer à s’entraider. Un moine et son disciple dorment chez le paysans d'A me na. Le moine lui demande plusieurs fois s'il dort et quand il pense que le paysan est enfin endormi, il parle avec son disciple d’un trésor caché dans le village. Le lendemain, le paysan déterre le trésor et utilise l’or pour se faire marchand. Il fait aussi beaucoup d’offrandes et de donations. Quand ses amis viennent lui demander de l'aide, il leur donne de l’or qu’ilatrouvé. Un paysan de Minkaba village investit alors dans une plantation de tamariniers et fait fortune en vendant des feuilles de tamarinier. (jusqu'à 44 min.). U San Tun raconte ensuite les artisanats, les croyances des habitants de Paukkan, d'où il est apparemment originaire (jusqu'à 46.50 min.). U Toe Lon raconte l'histoire de deux amis de Birmanie centrale, l'un fait le patron, l'autre le travailleur, et partent pour le bas pays. Ils arrivent dans un monastère et se mettent au service du moine. Le patron fait mélanger des bananes et du sucre de palme au travailleur pour les offrir au moine. Le patron va voir le moine pour lui demander des bananes, mais il se trouve nez-à-nez avec deux sculptures métalliques, l'une de chien et l'autre de perroquet, que le moine, passionné de métallurgie, avait forgé lui-même. L'homme se moque de ces sculptures en présence du moine qui, vexé, refuse de lui donner des bananes. Alors le travailleur va voir le moine et, ayant appris des erreurs de son ami, vante le talent du forgeron. Le moine, heureux, lui offre alors des bananes et du sucre de palme. Il lui offre aussi des fruits du jacquier, mais les deux hommes de Birmanie centrale ne savent pas ce que c'est. Ils les cuisinent alors en curry, avec beaucoup trop de pâte de poisson fermenté, et trouvent cela très salé (le son est ensuite plus bas et il est plus difficile de comprendre). Ils repartent ensuite dans leur village, puis reviennent à nouveau dans le bas pays. (coupé à 67 min., la fin se trouve dans l'enregistrement suivant BER-1964-BUR-029-B_SOUND)
ဦးစံထွန်းသည် ပုဂံအကြောင်းပုံပြင်တပုဒ်ကိုပြောသည်။ (အသံသွင်းတိတ်ခွေ၏ သတင်းအချက် အလက်အရ) ပုံပြင်၏ အစပိုင်းသည် သဲကွဲစွာမကြားရပါ။ အမျိုးသားတဦးသည် သူ၏သူငယ်ချင်းအား သားသမီးများကိုကျွေးရန် လိပ်ဥတလုံးပေးသည်။ သူငယ်ချင်း၏ဇနီးသည်ကပေးလိုက်သော လိပ်ဥကို ပြုတ်၍ကလေးငယ်အားကျွေးသည်။ နောက်ရက်များတွင်လည်းကလေးငယ်ကလိပ်ဥကျွေးရန်တောင်းဆို သဖြင့် မိခင်ကအိမ်တွင်ရှိသော ကြက်ဥများကိုပြုတ်၍ကျွေးသည်။ ထိုအိမ်မှ ကြက်မသည် သူ၏ကြက်ဥများတလုံးပျောက်ဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရပြီး ဝမ်းနည်းစိတ်ဖြင့် အိမ်ရှင်အမျိုးသမီးကို ငရဲကျ စေလိုကြောင်းဆုတောင်းသည်။ ၄င်းတို့၏ နောက်ဘဝတွင် သူမသည် ကျားကိုစားရပါလို၏ ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၄င်းတို့၏ နောက်ဘဝတွင် ကြက်မသည် ကျားအဖြစ်ဝင်စား၍ အိမ်ရှင် အမျိုးသမီးသည် သမင်အဖြစ်ဝင်စားသည်။ သမင်က နောင်ဘဝတွင် သူမသည် ကျားကို စားရပါလို၏ဟူ၍ ဆုတောင်းပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် ၄င်းတို့သည် နောက်ဘဝတွင် ကျားသည်ကြောင်ဖြစ်၍ သမင်သည် ကျားဖြစ်လေသည်။ ၄င်းတို့၏ ဘဝဝင်စားမှု ကိုဆက်ကာဆက်ကာဖြစ်သည်မှာ ကြက်မရော အမျိုးသမီးပါ လူဝင်စားများဖြစ်လာကြသည်အထိဖြစ်လေသည်။ ၄င်းတို့နှစ်ဦးသည် သား သမီးမရှိသော လူချမ်းသာ လင်မယားဖြစ်လာကြသည်။ မိန်းမသည် လင်ယောက်ျားဖြစ်သူအား အိမ်နီးချင်းအမျိုးသမီးတဦးနှင့် လက်ထပ်ရန် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ၄င်းတို့တွင် ကလေးများရှိလာခဲ့သည်။ သို့သော်ပို၍ပျော်ရွှင်မှုမရရှိကြပေ။ ထို့ကြောင့် တဦးနှင့်တဦး ပျော်ရွှင်မှုကို မရစေရန်ဆုတောင်းကြပြန်သည်။ ၄င်းတို့၏နောက်ဘဝတွင် ပထမမယားသည် ပုန်းမကြည်ဘီလူးမ အဖြစ်ဝင်စား၍ ဒုတိယမယား၏ သားသမီးများကိုစားပြန်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးသည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအား ဖူးမြော်ရန်သွားကြသည်။ (၁၁ မိနစ်တွင်ပြတ်တောက် သည်၊ ထို့နောက် ၁၂ မိနစ်တွင် စတင်ပြန်သည်။) နောက်ပိုင်းတွင် ပုဂံမြို့မှ ပုန်းမကြည်(နတ်) ဖြစ်သွားသောအကြောင်းဖြစ်သည်။ ပုန်းမကြည်(နတ်)သည် လယ်သမားများအား မိုးလေဝသ၊ ရာသီဥတုကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် များပေးသည်။ ထို့နောက် ပုဂံအနီးတဝိုက်ရှိ ဒေသများတွင် မောင်အောင်ဒိုင်အမည်ရှိ နတ်ကိုပူဇော်ပသ သည်။ ၎င်းသည် နွားကျောင်းသားတဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး သေလွန်သောအခါ ပုဂံတွင် နတ်တပါးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းနတ်သည် နွားများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသည့်နတ်အဖြစ် လူသိများလာသည်။(၁၅ မိနစ်ထိ) ဦးစံထွန်းသည် သူငယ်ချင်းနှစ်ဦး အတူတကွခရီးထွက်၍ စီးပွားရှာရာမှ ကြွယ်ဝလာကြသည်။ ပုံပြင်ကိုပြောသည်။ ပထမလူသည် သေချာစွာရှာဖွေစုဆောင်း၍ ငွေကြေးကြွယ်ဝချမ်းသာလာ၍ ဒုတိယ လူမှာမူ အသုံးအဖြုန်းများပြီး ငွေကြေးမစုဆောင်းမိဘဲရှိသည်။ (မိမိတို့ဒေသသို့ ပြန်သည့် အချိန် တွင် ဒုတိယလူသည် ပထမလူကိုသတ်ပြီး သူ၏ငွေကြေးများကို ယူပြီး ပြန်ရန်ကြံစည်သည်။ ပထမလူက ငွေကြေးများကိုသာယူပြီး အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုသည်။ သို့သော် လက်မခံဘဲ ပထမလူအား သတ်ဖြတ်လိုက်သည်။ ပထမလူ၏ချမ်းသာကြွယ်ဝသမျှကို ယူဆောင်၍ ရွာသို့ပြန်သွားသည်။ ဒုတိယလူသည် မိမိအရပ်သို့ပြန်ရောက်သည့်အခါတွင် ပထမလူ၏ မိသားစုများအား ထိုသူမှာ တခြားအကြောင်းတခုကြောင့် သေလွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းလိမ်လည်ပြောပြခဲ့သည်။ ဒုတိယလူ အိမ်ပြန် ရောက်သောအခါ အဖြစ်မှန်ကို ဇနီးအားဝန်ခံပြောဆိုမိသည်။ လင်မယားရန်ဖြစ်သောအခါ ပထမလူ၏ မိသားစုက အဖြစ်မှန်ကိုသိရှိသွားပြီးတရားရုံးတော်သို့ရောက်သွားကြသည်။ (၂၃ မိနစ်ထိ) လွန်လေပြီးသောအခါ ရဟန်းတပါးသည် ဥာဏ်ပညာဗဟုသုတအရာ၌ကြွယ်ဝသည်ဟု ကျော် ကြားသော ပေါက္ကံရွာမှတံငါသည်တဦးနှင့်တွေ့ဆုံသည်။ တံငါသည်သည် ရဟန်းအားပါးနပ်စွာ ပရိယာယ်သုံး၍ပြောဆိုသောကြောင့် ရဟန်းသည် တံငါသည်ပြောစကားကို နားမလည်ခဲ့ပေ။ ရဟန်းသည် ကျေးလက်ဒေသတွင် ဖြေရှင်း၍မရသောစကားထာများကိုပြောကြားသော အမျိုးသမီး များနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ သည်။ (၂၉.၂၀မိနစ်ထိ) အောက်မြန်မာပြည်မှ နန္ဒသူရအမတ်ထံတွင် ပုဂံဒေသရှိအမျိုးမျိုးသောရပ်ရွာများမှ ရွာသူ ရွာသားများ အမှုထမ်းနေကြသည်။ ၄င်းတို့အတွင်းမှ တဦးမှာ ‘အားမနာ’ဟုအမည်ရှိသောကျေးရွာမှဖြစ်သည်။ ထမင်းချက်အမှုထမ်းရွာသားသည် စွန်ချီလာသည့်ငါးကို ရခဲ့၍ ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးကြောင်းကို သိရှိသွားပြီး ထိုသို့သူတပါးထံမှပစ္စည်းကို အသုံးမပြုသင့်ကြောင်း ၄င်းသဘောပေါက်အောင်ပြောဆိုကြရသည်။ ထို့နောက်၄င်းအမှုထမ်းအားလုံးသည်နောင်တွင်လည်း အချင်းချင်းကူညီစောင့်ရှောက်ရန်အချင်းချင်းကတိသစ္စာထားပြီးဇာတိရွာသို့ပြန်သွားကြသည်။ ရဟန်း တပါးသည်နှင့် လူတယောက်သည် အားမနာရွာသား၏အိမ်တွင် ညအိပ်တည်းခိုကာ သီတင်းသုံးသည်။ သိုက်ဆရာရဟန်းသည် အားမနာရွာသားအားအိပ်ပြီလားဟု အကြိမ်ကြိမ်မေးမြန်းသည်။ အိမ်ပျော်ပြီဟု ထင်သည့်အချိန်တွင် ရဟန်းနှင့်သူ၏တပည့်တို့သည် အားမနာရွာ၏ အနောက်ဘက် ကျောက်တိုင် အောက်တွင် ရွှေငွေများစွာရှိကြောင်း ပြောဆိုကြသည်ကို အားမနာရွာသားကကြားခဲ့သည်။ နောက် တရက်တွင်ရွာသားသည် ၄င်းရွှေများကိုတူးဖော်ရရှိခဲ့ပြီး အိမ်တွင်သိမ်းဆည်းခဲ့ကာ ကုန်အရောင်း အဝယ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အလှူအတန်းများလည်းလုပ်ခဲ့သည်။ နွမ်းပါးသောသူငယ်ချင်းများလာရောက် အကူအညီတောင်းခံလာရာ ၄င်းတို့အားလည်း ရရှိထားသောရွှေအချို့ကိုဝေငှကူညီခဲ့သည်။ မင်းကပါ ရွာသားသည် မန်ကျည်းစေ့မှအပင်ဖြစ်အောင်စိုက်ပျိုး၍ မန်ကျည်းရွက်များအားရောင်းချပြီး ရသော ငွေများဖြင့် လုပ်ငန်းများဆက်လက်လုပ်ကိုင်၍ စီးပွားဖြစ်ကာ ကြွယ်ဝသွား သည်။ (၄၄ မိနစ်ထိ) ထို့နောက် ဦးစံထွန်းသည် ပေါက္ကံသားပီသစွာဖြင့် ပေါက္ကံပြည်၏ လက်မှုအနုပညာ ဓလေ့ထုံးစံနှင့် ယုံကြည်မှုများကိုရှင်းပြသည်။ ဦးတိုးလုံသည် မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းမှ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးပုံပြင်ကိုပြောသည်။ ပထမသူငယ်ချင်း သည် သူဌေးအလုပ်ရှင်ကဲ့သို့ပြုမူပြီး၊ ဒုတိယသူငယ်ချင်းကို အလုပ်သမားအဖြစ်ဆက်ဆံသည်။ သူတို့ သည်အောက်မြန်မာပြည်သို့အလုပ်ရှာထွက်ခွာသွားကြသည်။ ၄င်းတို့သည် ဘုန်းကြီးကျောင်းတခုသို့ ရောက်ရှိသွားရာ ပထမသူငယ်ချင်းသည် ဒုတိယသူငယ်ချင်းအား ထန်းလျက်နှင့် ငှက်ပျောသီးကို ရော နယ်စေပြီး ရဟန်းအားလှူဒါန်းစေသည်။ ရဟန်းသည် သတ္တုနှင့် ရုပ်ထုထုလုပ်ရန်အလွန် ဝါသနာပါသဖြင့် ကျောင်းတွင် ခွေးတကောင်နှင့်ကြက်တူရွေးတကောင်၏ရုပ်တု နှစ်ခုထု၍ထားရှိသည်။ သူငယ်ချင်း နှစ်ဦးမှတဦးသည် ရဟန်းထံမှ ငှက်ပျောသီးများကို တောင်းခံရန်အသွားတွင် ရုပ်ထုများမှာ လက်ရာကိုကဲ့ရဲ့ပြောဆိုမိ၍ ရဟန်းမှာ ဒေါသထွက်ကာ မသိဟန်ပြု၍နေသည်။ ဒုတိယသူငယ်ချင်းသည် ရဟန်းထံသို့ထပ်၍ ငှက်ပျောသီးများတောင်းရန်အသွားတွင် ပထမလူ၏အဖြစ်ကို သဘောပေါက်ပြီး ကျောင်းတွေ့ရသောရုပ်တု နှစ်ခု၏အသက်ဝင်မှုကို မြှောက်ပင့်၍ချီးကျူးပြောဆိုရာ ရဟန်းသည် ကျေနပ်သွားပြီး ၄င်းအား ငှက်ပျောသီး နှင့် ထန်းလျက် ပေးလိုက်သည်။ သို့သော် ၄င်းတို့နှစ်ဦးသည် ၀မ်းမဝသဖြင့် ပိန္နဲသီးကိုမမြင်ဖူး မစားဖူးကြောင်းပြောရာ ရဟန်းက တခြမ်းပေးလိုက်ပြန်သည်။ ထပ်မံ၍ သူတို့သည် ပိန္နဲသီးကို ငပိများစွာဖြင့်ချက်ပြုတ်ရာ ဟင်းသည် အလွန်ငံကြောင်းပြောဆိုပြီး ပိန္နဲသီး တလုံးကိုအားလုံးစားရရန် ပရိယာယ်ဖြင့် လှည့်ပတ်ပြောဆိုသည်ကို တွေ့ရသည်။ (အသံသွင်းချက် လွန်စွာတိုးသွားပြီး နားလည်ရန်ခက်ခဲသည်။) ထို့နောက် ၄င်းတို့သည် ဌာနေ ရွာသို့ပြန်သွားခဲ့ကြသည်။ ၄င်းတို့သည် အောက်မြန်မာပြည်သို့ ထပ်မံထွက်ခွာသွားကြပြန်သည်။ (၆၇ မိနစ်၌ ပြတ်သွားသည်၊ ပုံပြင်၏အဆုံး သတ်ကို အ သံသွင်းချက် BER-1964-BUR-029-B Sound တွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။)
U San Tun tellsatale of Pagan (according to the information on the recording tape) (the beginning of the tale is not audible). A man gives his friendaturtle egg to feed his children. The friend’s wife boils the egg and feeds it to the children. The day after, as her youngest child asks for more turtle egg, the mother boils some of the house-hen’s eggs. The hen, saddened to see her eggs disappearing, wishes the lady of the house to go to hell. In their next life, the hen reincarnates inatiger and the woman inadeer. The deer wishes that in her next life she could eat the tiger. So in their next life, the tiger becomesacat and the deeratiger. And this goes on and on until the two beings reincarnate as humans. They becomeacouple of wealthy people without children. The wife allows her husband to get married to the neighbor. They have children, but are not happier and wish unhappiness to each other. In their next life, the first wife becomes the Phone Ma Kyi ogress who eats the children of the second wife. Both of them go and see the Buddha (cut at 11 min., then starts again at 12 min.). In the end, she [the one who used to be the hen] becomes the Pone Ma Kyi nat (spirit) of Pagan, who gives predictions to peasants about the weather. In Pagan surroundings, (people) also worship the nat (spirit) Maung Aung Daing. He wasacow-keeper who died and became nat of Pagan. He came to be known as the spirit who protects cows (until 15 min.). U San Tun then tells the story of two friends who go makeafortune on their own. The first one works hard and saves money and eventually gets wealthy, while the second one spendsalot of money, doesn’t save at all and doesn’t get wealthy. Then they get back to their province, and the second friend plans to kill the first one and takes his wealth. Although the first one begs him to spare his life and takes only his money, the second one kills him. He takes his wealth and goes back to the village, where he tells lies about his friend’s death. However, he confesses his crime to his wife. But one day they haveafight, and his friend’s family gets to know the truth. Then the affair goes to the court of justice (until 23 min.). A long time ago,amonk metafisherman fromaplace called “eloquent” in Paukkan region, whose inhabitants were famous for their knowledge. The fisherman spoke so wisely and with so much wit that the monk did not understand him. The monk then met several women in the countryside who told him insoluble riddles (until 29.20 min.). The court official Nanda Thura from Lower Burma had people from different villages of Pagan for servants. One of them was from ‘A me na’ village [which means 'not embarrassed’]. One day, the servants learn that he cookedafish brought byahawk, and have them eat that fish. They tried to make him understand that he couldn't use somebody else's things and goods. Then they all went back to their native village, but promised to keep supporting each other. A monk and his disciple slept at the house of the villager from ‘A me na’. At night, the monk asked the villager several times if he was sleeping, and when he thought the villager was asleep, he talked to his disciple aboutatreasure buried in the village. The next day, the villager went to dig the treasure, and used the money to becomeatrader, and to make donations as well. When his humble friends came to ask for help, he gave them some of the gold he had found. A villager from Minkaba planted tamarind trees, and madeafortune by selling tamarind leaves (until 44 min.). Next, U San Tun explains the arts and crafts, customs and believes of Paukkan region. U San Tun is apparently from Paukkan himself (until 46.50 min.) U Toe Lon tells the story of two friends from Central Burma: one acted as the boss, the second as the worker. They both left for Lower Burma. They arrived inamonastery and the boss asked the worker to mix bananas with jaggery to donate to the monk. This one, very much interested in metal work, had carved for his monasteryametal sculpture ofadog and one ofaparrot. The first of the two friends went to ask the monk to give him some bananas, but he made fun of the metal artwork. The monk got upset, and didn’t give him any of his bananas. The second friend went to see the monk, and knowing about his friend’s unfortunate mistake, he praised the monk artwork. The monk, contented, gave him bananas, jaggery, and some jackfruit. The men had never seen or eaten jackfruit before. They cooked it withalot of fish paste, and found it too salted (the sound is then lower and it is difficult to understand). Next, they went back to their village, and left again for Lower Burma. (cut at 67 min., the end of the story can be found in the recording BER-1964-BUR-029-B_SOUND).
Identifier: Ancienne cote: crdo-BER_1964_BUR_029_A
Identifier (URI): https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-8d027f26-0a45-3fd1-8bdf-c688345f6700
Is Format Of (URI): https://cocoon.huma-num.fr/data/bernot/private_bernot/masters/BER-1964-BUR-029-A.wav
Citation: Bernot, Denise (researcher); Candier, Aurore (consultant); Centre national de la recherche scientifique (sponsor); Institut national des langues et civilisations orientales (sponsor); Vittrant, Alice (depositor); Labex ASLAN (CNRS, ENS, Université Lumière Lyon 2) (sponsor); Khin Khin Zaw (consultant); Than Than Oo (consultant). 1964. Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale.